Thursday July 20, 2017 - 13:36:13 in Wararka by Super Admin
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe ayaa lagusoo bandhigay Col. Yaasiin Faarax oo Fiilo ku magac dheer iyo sedax askari oo kamid ahaa ilaaladiisa gaarka ah.
Col. Yaasiin Nuur Fiilo oo warbaahinta kula hadlay magaalada Jilib ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibadiis ay ka damqadeen dhibaatada ay gumeystayaasha Kenya iyo Itoobiya ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee kunool magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda.
Sarkaalkan is dhiibay iyo ciidamadii ilaala u ahaa ayaa goob fagaare ah uga dhawaaqay in Alle ay uga towbad keenay la shaqeyntii dowladaha Kenya iyo Itoobiya wuxuuna saaxibadii uu ugasoo tagay safka cadawga ugu baaqay in ay goostaan oo ay dhinac ka raacaan shacabkooda.
Sheekh Max'med Abuu Cabdalla oo ah waaliga Jubbooyinka oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in askari walba oo kasoo goosta safka dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada shisheeyaha raacsan loo lacageyn doono hubka ay lasoo goostaan islamarkaana amni iyo nabad gelyo ah ku heli doonaan meel walba oo ay dalka ka joogaan.
Boqolaal maleeshiyaad ah oo ciidamada Kenya iyo itoobiya kala qeyb qaatay duullaanka lagusoo qaaday dalka ayaa bilihii lasoo dhaafay isku dhiibayay maamullo islaami ah oo ka jirta gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Halkan ka dhageyso Sarkaalka kasoo goostay Kismaayo oo warbaahinta la hadlay MP3